बाबुरामलाई हराउन गोप्य साँठगाँठ-Nagarikaawaj.com
बाबुरामलाई हराउन गोप्य साँठगाँठ
सोमवार, कार्तिक १८, २०७०
एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग हार्ने पक्का भएपछि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ का एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेल भन्न थालेका छन्, ‘एमाओवादीका जंगलीहरुलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर हामीले गल्ती गरिएछ । यी हत्याराहरुलाई यो निर्वाचनमा हराएर फेरी जंगल धपाउनु पर्ने भएको छ । एउटा जंगली (नेकपा–माओवादी)लाई त धपायौं, अब अर्कोलाई पनि लखेटनुपर्ने भएको छ ।’ देवीनगरलगायतका क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा पौडेलले विद्रोहकालीन घटना स्मरण गर्दै एमाओवादीले बुटवलमा हत्या हिंशा मच्चाएको, निर्दोषको अपहरण गरेको र सरकारी संरचना ध्वस्त पारेको बताएका थिए । यिनै विष्णु पौडेल अहिले निर्वाचन जित्न पुर्व पञ्चहरुका नेता दिपक बोहरासँग तालमेल गर्दैछन् । विष्णु पौडेलको बिगत र बर्तमानबारे स्थलगत भ्रमणपछि कमलेश डिसी र पंकज चौधरीको रिपोर्ट:
देवीनगरका एमाले कार्यकर्ता रामजी पाण्डे अचेल निराश छन् । त्यसको एउटै कारण हो, एमाले नेता विष्णु पौडेलले निर्वाचन जित्न पुर्व पञ्च र मण्डले नेता दिपक बोहरासँग तालमेल गर्नु । ‘हामी पार्टीलाई जिताउन भनेर अहोरात्र खटिएका छौं, हाम्रा नेता मन्डलेहरुसँग तालमेल गरिरहेका छन्’, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बुटवलमा शक्रिय रहेका रामजी भन्छन्, ‘विष्णु पौडेललाई आफनै क्षेत्रको चिन्ता छ । तर, यही ताल हो भने उनी हार्न बेर लाउँदैनन् ।’
रामजीको मात्र हैन, यस क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताको साझा असन्तुष्टी हो, यो । पौडेलले आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा राप्रपाका उम्मेदवार दिपक बोहरासँग गोप्य तालमेल गरेका छन् । यही कारण रुपन्देही २ मा एमालेले निकै कमजोर उम्मेदवारका रुपमा एमालेका क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष भरत पोखरेललाई एकाएक खडा गरेको छ । भरत पोखरेल उम्मेदवार बनेपछि ‘पार्टीले हार्ने उम्मेदवार खडा ग¥यो’ भन्दै क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रमुख हरि अधिकारीले राजीनामा दिए । अधिकांश जिल्ला कमिटी सदस्यले प्रचारमा नहिँड्ने बताइरहेका छन् र त्यसको असर रुपन्देहीमा देखिएको छ । पौडेल र बोहरा तामेल अनुसार बोहराले रुपन्देहीका १, २, ४ र ५ मा एमालेलाई सघाउने र क्षेत्र नम्बर २ मा दिपकलाई जिताउने सहमती भएको बताइन्छ । ‘यो जनआन्दोलन र शहीदप्रतिको अन्याय हो, कुनै मण्डले उम्मेदवारसँग तालमेल गरेपछि हामी कसरी जनतासँग भोट माग्न जाने ?’, अर्का एमाले समर्थक रामप्रसाद भुषाल भन्छन् ।
बोहराको शरणमा किन ?
गत असोज १७ गते विहान ११ बजे एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई हजारौं कार्यकर्ता र समर्थकका साथ हिमालीपथस्थित निर्वाचनका कार्यालयमा आफनो उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा जनतामा व्यापक उत्साह देखिएको थियो । उम्मेदवारी दर्तापछि एमाओवादी उम्मेदवार भट्टराईले भनेका थिए, लुम्बीनी अंचलकै विकासका लागि मैले रुपन्देहीबाट उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’ भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि दिउँसो मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेलले पनि भट्टराईकै भनाईको सिको गर्दै ‘समग्र लुम्विनीको विकासको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ’ भनेका थिए । त्यसै दिन उनले एमाओवादी जंगली पार्टी भएकाले अब फेरी यसलाई जंगलतिरै फर्काउनुपर्ने बताएका थिए । अचेल घर दैलो अभियानमा पनि उनी बारम्बार एमाओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर गल्ती भो भन्दै फेरी जंगल धपाउनुपर्ने भाषण गर्र्दै हिंडिरहेका छन् । पौडेलले भन्ने गरेका छन, ‘गोरखाबाट मात्र हैन, अन्तरिक्षबाट आए पनि एमालेको किल्ला कसैले हल्लाउन सक्दैन । बाबुरामलाई यहाँका जनताले फेरी गोरखाकै जंगलतिर धपाउनेछन् ।’
यो भाषण उनको हतासाको अभिव्यक्ति मात्र थियो । किनकी, उनलाई अब यस क्षेत्रमा हार्छु भन्ने भइसकेको छ । पौडेल दिपक बोहराको शरणमा पर्नुको खास कारण रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ मा हार्ने पक्का भएर नै हो । यो उनको हतास मानसिकता नै भएको एमाले कार्यकर्ताहरु पनि स्वीकार्छन् । विष्णु पौडेलले विगत संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा १३ सय मतको अन्तरले जितेका थिए । त्यसबेला दोश्रो स्थानमा नेपाली काँग्रेस थियो । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता, पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई आफनो क्षेत्रबाट खडा हुने लागेको थाहा पाएपछि विष्णु पौडेल सुरुमै भयभित भएका थिए । संविधानसभामा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न उनले रुपन्देही ४ का साथै नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट समेत आफ्नो नाम सिफारिश गराएका थिए । तर, नवलपरासीका एमाले कार्यकर्ताले विष्णु पौडेलको नाममा गम्भीर आपत्ति जनाए । एमाले कार्यकर्ताहरुले बुटवलमा बाबुराम भट्टराईसँग हार्ने डरले विष्णु पौडेल नवलपरासीबाट खडा हुँदा लुम्बीनी अंचलमै गलत सन्देश जाने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
‘हामीले बाबुरामसँग डराएर नवलपरासीबाट लड्ने विष्णुको चाहना पुरा हुन दिएनौं, आफनो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने, अनी अर्काको क्षेत्रमा आँखा गाडने प्रवृत्ति गलत हो भनेर भन्यौं’, नवलपरासीका एक जिल्लास्तरीय एमाले नेता भन्छन् । एमाले नेता घनश्याम भुषालले त्यसबेला भनेका थिए, ‘विष्णुजीलाई बाबुरामजीसँग हार्छु भन्ने लाग्छ र नवलपरासीबाट खडा हुन चाहनुहुन्छ भने क्षेत्र नम्बर ४ मा मलाई उम्मेदवार बनाए हुन्छ ।’ यसरी व्यापक विरोधपछि विष्णु पौडेलले नवलपरासीबाट टिकट पाएनन् । बरु, उनको ठाउँमा एमाले हाइकमान्डले कृष्ण पौडेललाई खडा गरेको छ । बाबुरामसँग भिड्नु परेपछि अचेल विष्णु पौडेलको रातको निद्रा न दिनको चैन हराएको बुटवलका एमाले कार्यकर्ताहरु स्वयं बताउँछन् ।
नवलपरासीबाट खडा हुन नपाएपछि उनी रुपन्देहीमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्दै दिपक बोहराको शरणमा परेका हुन् । दिपक बोहराले उनलाई सीमा पारीबाट गुन्डाहरुको व्यबस्था गरिदिने बचन दिएको पनि खुलासा भएको छ । रुपन्देहीबाट हार्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका पौडेल भाषण गर्दा भने ‘रुपन्देही जिल्ला एमालेको किल्ला भएकाले गोरखा त के अन्तरिक्षबाट आए पनि कसैले यो किल्ला तोडन नसक्ने’ बताइरहेका छन् । तर, बाबुरामका एक दुई आमसभाबाटै एमालेको किल्ला हल्लिइसकेको छ । निर्वाचनसम्म पुरै उखेलिने अवस्था रहेको बुटवल क्षेत्रको भ्रमण गरेर फर्किएका लेखक र कलाकार बताउँछन् ।
पार्टी राजनीति मात्र हैन, राष्ट्रिय राजनीतिमै धुन्धुकारी रवैया अपनाउने विष्णु पौडेललाई संविधानसभामा ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा स्वयं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नै रहेको बुझिन्छ । एमाले अध्यक्ष खनालले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई प्रधानमन्त्री निवासमा छिर्न नदिएको घटना चर्चित छ । त्यसबेला उनको नाम गृहमन्त्रीका सिफारिश गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री खनालले उनलाई कुनै हालतमा गृहमन्त्री नबनाउने अडान लिए । केपी ओली र माधव नेपाल विष्णुलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, झलनाथले नमानेपछि उनलाई थर्काउन भनेर बालुवाटार जाँदा केपी ओली, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री निवासको गुटबाटै फिर्ता पठाइएको थियो । पछि खनालले उनलाई रक्षा मन्त्री बनाए । गृहमन्त्री हुने पौडेलको सपना त्यसबेला पुरा हुन पाएन । अहिले पनि एमालेको एउटा पंक्ति पौडेललाई हराउन लागि परेको छ ।
दस्तावेज चोरी काण्ड
२०५४ सालतिर एमाले विभाजन भयो । बामदेव गौतम र सीपी मैनाली मिलेर नेकपा(माले)को गठन गरे । विष्णु पौडेल त्यसबेला मालेमा प्रवेश गर्ने तरखरमा थिए । उनले महाकाली सन्धीको विरोध पनि गरेका थिए । माले पार्टी गठनका लागि गोपी गुरु (गोपीरमण उपाध्याय)ले राजनीतिक कार्यदिशासहितको दस्तावेज तयार गरेका थिए । ‘विष्णु पौडेलले गोपी गुरुसँग अध्ययनका लागि भनेर त्यो दस्तावेज मागेर लगे, अनी एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा लगे । त्यस्ता ठग र चोरहरुलाई नेकपा मालेमा कुनै स्थान छैन’, त्यसबेला मालेमा आवध्द रहेका र हाल एमाले बनेका योगेश भट्टराईले कमलादीमा माले पार्टीको उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए । विष्णुले मालेको दस्तावेज चोरेर एमाले कार्यालय बल्खु पु¥याएको खबर बाहिर आएपछि गोपी गुरुले उनको सार्वजनिक बेइज्जेत गरे । त्यसपछि उनी एमालेमै रहन बाध्य भए । महाकाली सन्धीमा बामदेव गौतमलाई धोका दिदा उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आर्थिक शुभ लाभ गरेको चर्चा स्वयं एमाले नेताहरु गर्छन् ।
जहाँ गयो, त्यही लोडसेडिङ
जलश्रोत मन्त्री हुँदा उनले लोडसेडिङ हटाउने चर्को भाषण गरेका थिए । रुपन्देही उद्योग संघद्वारा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भाषण गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘धन्दा नमान्नुस्, अब हामी लोडसेडिङ हटाउने कोशिस गर्र्दैछौं । अब लोडसेडिङ हुँदैन् ।’ उनले यसो भन्न नपाउँदै कार्यक्रम स्थलमै बत्ति गएको थियो । कार्यक्रममा हाँसोको फोहरा छुट्यो । जलश्रोत मन्त्री पौडेलले लाज पचाएर भनेका थिए, ‘म जहाँ गयो, त्यहीं लोडसेडिङ हुन थाल्यो । हिजो टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ताका लागि पुगेको थिएँ, लोडसेडिङ भयो ।’
पार्टी हैन, एनजीओको चिन्ता
विष्णु पौडेलले इनसेकलगायतका विदेशी डलरमा चल्ने संस्थासँग पनि हिमचिम बढाउँदै आएका छन् । विभिन्न विदेशी डलरवादी संस्थासँग यीनको सम्बन्ध रहेको छ । यीनलाई एमाले पार्टीभन्दा पनि एनजीओको चिन्ता रहेको प्रमाण एउटा घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ । केही समयअघि नेपाल नागरिक पार्टी र एमालबीच एकता हुने तयारी भयो । त्यसका लागि नागरिक पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखी र चन्द्रकुमार चौधरी संविधानसभा प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुने र राजकुमार रेग्मी लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरु समानुपातिकमा खडा हुने तय भएको थियो । अन्तिम समयमा आएर विष्णु पौडेलले एकता प्रकृया भाँडेको नागरिक पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘हामीले विदेशी डलर र एनजीओको विरोध गर्दै आएका थियौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पनि विरोध गरेका थियौं’, ति सदस्यले भने, ‘विष्णु पौडेल बार्ता संयोजक थिए, उनले डलर र एनजीओविरोधीहरुलाई पार्टीमा हुल्दा समस्या खडा हुन्छ भन्दै एकतामा भाँजो हाले ।’ नागरिक पार्टीमा रहेका जनजातीहरुले त्यसैदिन एमाले भनेको डलरवादी पार्टी रहेछ भन्ने चाल पाए । त्यसपछि त्यो पार्टीका केही नेता एमाओवादीमा प्रवेश गरे । त्यसमध्ये चन्द्रकुमार चौधरीलगायत ३ जनालाई एमाओवादीले समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।
यसरी एमालेमा प्रवेश गर्न लागेका जनजाती समुदायका नेताहरुलाई भड्काएर एनजीओको दलाली गरेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले विष्णु पौडेलको चर्को आलोचना गरेका थिए । ‘यो घटनाले पनि विष्णु पौडेल पार्टीको हितमा भन्दा आफनो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको स्पष्ट हुन्छ’, एमाले कार्यकर्ता रामजी पान्डे भन्छन्, ‘अहिले बुटवलका सम्पूर्ण जनजाती, थारुहरु पौडेलसँग रिसाएका छन् ।’